Solstices na equinoxes: kedu ihe ha bụ, njirimara na ọchịchọ ịmata ihe | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị maara na ụwa nwere ọtụtụ mmegharị nke bụ ntụgharị na ntụgharị asụsụ. Site na nke a anyị na-ekwu na n'ihi mmegharị ndị a, enwere solstices na equinoxes. Equinox bụ oge n’afọ mgbe anyanwụ dị n’elu equator, ya mere a na-edo ya n’elu zenith. Nke a pụtara na ehihie na abalị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu oge. Ihe megidere ya na solstice.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara niile na ọdịiche dị n'etiti solstices na equinoxes.
1 Kedu ihe bụ solstices na equinoxes
2 Solstices na equinoxes nke oge ọkọchị na udu mmiri
2.1 Oge Ezumike
2.2 Solstices na equinoxes: oge ​​oyi solstice
2.3 Mmiri na Mgbụsị akwụkwọ Equinoxes
Kedu ihe bụ solstices na equinoxes
Nke mbụ bụ ịmata ihe solstices na equinoxes bụ. Equinox bụ mgbe anyanwụ dị n’akara kere ụwa n’akwụsịghị akwụsị. Nke ahụ pụtara, ha ga-ewe ihe dịka elekere iri na abụọ. Nke a na-eme ugboro abụọ n'afọ, ihe dị ka Machị 20 na Septemba 22. Nke a dabara na mmalite nke oge opupu ihe ubi ma daa na mpaghara ụfọdụ.
Ọ bụrụ na anyị kee ụwa ụzọ abụọ, otu na-enwu site n’ọkụ anyanwụ ma na-ekpuchi nke ọzọ. Na otu anyị nwere ụbọchị na nke ọzọ n’abalị. Akara nkewa gafere site na okporo osisi. Nke a na-eme n'ihi na n'oge ngwangwa ahụ, a naghị agbada okporo osisi abụọ ahụ ma ọ bụ pụọ na anyanwụ. Ọ naghị eme otu ụbọchị. Ha nwere oke oke nke otutu ubochi. Nke a bụ n'ihi na ogologo afọ anaghị abụkarị otu. Cheta kwa afọ anọ ọ bụrụ na ị gbakwunye otu ụbọchị na kalenda n'ihi na ọ bụ afọ itegharị. N'oge equinoxes, anyanwụ dị n'otu n'ime isi ihe abụọ dị n'akụkụ nke ebe eriri igwe na ecliptic gafere. Nke a kwekọrọ na gburugburu dị n'otu ụgbọ elu dị ka akara kere ụwa abụọ. Nke ahụ bụ, ntụgharị nke ụwa equator bụ mbara igwe.
Egwuregwu nke vernal equinox na-eme mgbe naanị ọ na-aga n'ebe ugwu na ụgbọelu nke ecliptic wee gafere igwe ikuku ụwa niile. N'ebe a anyị na-ahụ na oge opupu ihe ubi na-amalite na mgbago ugwu. N’aka nke ọzọ, mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ na-eme mgbe anyanwụ na-agabiga na mbara igwe mbara igwe n’ebe ndịda. Ọ na-egosi mmalite nke ọdịda.
Solstets bụ ihe omume nke anyanwụ na-eru ebe dị elu ma ọ bụ nke kasị ala n'ime afọ niile na mbara igwe. N'ime otu afọ na Northern Hemisphere, e nwere solstices abụọ. Na otu aka, anyi nwere oge ekpomoku ma na aka ozo, n’oge udu mmiri. Nke mbụ na-ewere ọnọdụ na June 20-21 na oge oyi na Disemba 22-22. N’oge solstọt abụọ ahụ, anyanwụ dị n’otu n’ime usoro nchepụta ụwa abụọ a na-akpọ Tropic of Cancer na Tropic of Capricorn. Mgbe anyanwụ dara na Tropic of Cancer bụ mgbe oge anwụ na-ewere ọnọdụ na mgbe ọ dị na Tropic of Capricorn, oge oyi na-amalite.
N'oge nke mbụ solstice ọ bụ ebe anyị na-ahụ ụbọchị kachasị ogologo nke afọ, ebe nke abụọ bụ ụbọchị dịkarịsịrị anya na abalị ogologo.
Solstices na equinoxes nke oge ọkọchị na udu mmiri
A na-echekarị na ụbọchị ahụ, nke mbụ nke oge ọkọchị, bụ nke kachasị ewu ewu. Mana ọ dịghị mkpa. Ikuku ụwa, ala anyị na-eje ije na ya na oke osimiri n’ịdọta akụkụ nke ume site na kpakpando nke igwe ma debe ya. A na-ewepụta ike a ọzọ n'ụdị okpomọkụ; otu odi, buru n’obi na Ọ bụ ezie na ala na-ewepụta okpomọkụ ngwa ngwa, mmiri na-ewe ogologo oge.
N'ime nnukwu ụbọchị, nke bụ oge ezumike nke anwụ, otu n'ime ụwa abụọ na-enweta ike kachasị ike site na Anyanwụ nke afọ, ebe ọ bụ na ọ dị nso na kpakpando eze na, ya mere, ụzarị nke kpakpando ahụ a kpọtụrụ aha na-abịarukwu nso. Ma ọnọdụ okpomọkụ nke oke osimiri na ala ka di nwayọ ma ọ bụ pere mpe, ugbu a.
Solstices na equinoxes: oge ​​oyi solstice
Planet Earth rutere n'otu ebe n'okporo ụzọ ya ebe ụzarị anyanwụ na-ada elu n'otu ụzọ ahụ ọzọ oblique. Nke a na eme n'ihi na ụwa chọrọ karịa ma ụzarị Anyanwụ na-abịarute perpendicularly. Nke a na-akpata awa ole na ole nke ìhè anyanwụ, na-eme ka ọ bụrụ ụbọchị kacha nso n’afọ.
Enwere echiche ojoo n’etiti mmadu n’otu n’otu gbasara oge oyi na udu mmiri dika odi anya site n’uwa rue Anyanwu. Aghotara na n’oge udu mmiri kariri oku karia nihi na Uwa di nso na Anyanwu ma n’oge oyi, oyi kariri n’ihi anyi chọta ebe ọzọ. Ma ọ bụ kpam kpam na-abụghị. Karịa ọnọdụ nke ụwa gbasara Anyanwụ, ihe na-emetụta ọnọdụ okpomọkụ nke ụwa bụ ọchịchọ nke ụzarị anyanwụ na-ada n'elu ya. N'oge oyi, na solstice, Earthwa kacha nso n’anyanwụ, ma, tilt ya bụ nke kachasị elu na Northern Hemisphere. Maka nke a, mgbe ụzarị ọkụ rutere n'elu ụwa, ụbọchị na-adịkarị mkpụmkpụ ma ha pere mpe, yabụ ha anaghị ekpo ikuku ikuku nke ukwuu ma ọ dị karịa.
Mmiri na Mgbụsị akwụkwọ Equinoxes
N'ebe a, anyị ga-amata ọdịiche dị na akụkụ ụwa anyị nọ. N'otu aka, ugwu ugwu, mgbe ọ bụ afọ iri na anọ anyị nwere nke ahụ na poolu North ụbọchị ga-eme ọnwa isii, ebe na South osisi, otu abalị ga-ewe ọnwa isii. Ekwesịrị m iburu n’uche na ụbịa na-amalite n’ebe ndịda ala.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ihe ndị na-eme ka solstices na equinox bụ ọkachasị n'ihi mmegharị ụwa site na anyanwụ na ọnọdụ okpomọkụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-adabere n'ọchịchọ nke ụzarị anyanwụ. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere solstices na equinoxes.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Solstices na equinoxes